एक खुट्टाको सहारामा नाच्ने निलमको डिभोर्स : कुरा यस्तो छ !! | शुभ दिन
एक खुट्टाको सहारामा नाच्ने निलमको डिभोर्स : कुरा यस्तो छ !!
चर्चित नृत्याङ्गना निलम ढुंगानाको पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेद भएको छ । एक खुट्टाको सहाराले सवलाङ्ग सरह उत्कृष्ट नृत्य गरेर निलमले देश विदेशमा ख्याती कमाएकी छिन् । संयोग पनि कस्तो परेको छ भने प्रणय दिवसको सेरोफेरोमा निलमको जोडी बिच्छेदमा पुगेको छ ।
-पतिको गलत रवैया र व्यवहारका कारण ज्यान जोखिममा रहेको, लगायतका आरोप निलमले पतिमाथि लगाएकी छन । खबर डिसी नेपालमा छ